Mareykanka oo qirtay in 132 qof oo rayid ah ku dileen dalal ay Soomaaliya ka midtahay. – XAMAR POST
Howlgallada milatariga Mareykanka ee ka socda afar dal illaa sanadkii 2019-kii waxaa ku dhintay 132 qof oo rayid ah, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Wasaaradda Difaaca Maraykanka ee Pentagon loo yaqaan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay, 91 qof oo rayid ah lagu dhaawacay hawlgallada ka socda Ciraaq, Suuriya, Afgaanistaan iyo Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin sannadeedka Wasaaradda Difaaca ee ku saabsan khasaaraha rayidka ee la xiriira hawlgallada Mareykanka.
Khasaaraha ugu badan ee rayid ayaa ka dhacay Afghanistan, iyadoo 108 ay ku dhinteen 75 kalena ay ku dhaawacmeen, sida warbixinta lagu sheegay.
Ugu yaraan 22 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay 13 kalena waa lagu dhaawacay Ciraaq iyo Siiriya, halka laba qof lagu diley saddexna lagu dhaawacay Soomaaliya, si ku cad warbixinta Wasaaradda Difaaca Maraykanka.
Warbixinta ayaa soo baxday Saacadda ka dib markii Xildhibaano Maraykan ah oo ay hoggaaminayso Ilhaal Cumar dalbadeen in Maraykanku jawaab ka bixiyo duqaymaha lagu dilay dadka Rayid ah ee ka dhacay dalal ay Soomaaliya ka mid tahay.
Hay’adaha u dooda Xaquuqda Aadaha ayaa Dhawaan howlgalka Maraykanka ee Qaarada Afrika ka dalbaday in ay bixiyaan magdhawga dadka shacabka ah ee lagu dilay Gudaha Soomaaliya,inkastoon Dowlada Faderaalka Soomaaliya wali ka hadlin dilka dadka Shacabka ah loogu gaystay gudaha dalka.
Madaxwaynaha Dani Oo ka tacsiyeeyay geerida wasiirkii waxbarashada Jubbaland marxuum Maxamad Ibraahim Maxamuud.